Nyeinlatt.com: Cannot see wireless connection ?????
Cannot see wireless connection ?????
ကျနော်က Window7လေးတင်ထားတဲ့ Desktop computer ကို TP-Link wireless adapter နဲ့ချိတ်ပြီး internet ကိုအသုံးပြုနေတာပါ။ တနေ့မှာ Wireless connection icon အပေါ် အနီရောင်ကြက်ခြေခတ် လေးတစ်ခု တွေ့လို့ Icon အပေါ်ကို Pointer (မြှား) တင်ကြည့်လိုက်တော့ Not connected - No connections are available ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။
Icon လေးကို click ကြည့်တော့လည်း No connections are available Troubleshoot ဆိုပြီးပေါ်လာ ပါတယ်။ Troubleshoot ကို click တော့လည်း ဘာမှမထူးခြားလာပါဘူး။ ဒါနဲ့ TP-Link wireless adapter ကို သေချာ connect ပြန်လုပ်ပြီး Driver ကို update လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ မရပါဘူး။ တော်တော်ကိုခါင်းခြောက် သွားပါတယ်။ Google ကိုသွားပြီး Forum တွေကိုရှာဖတ်ကြည့်ပြီး အောက်မှာပြထားတဲ့ နည်းလမ်းလေး အတိုင်းလုပ်ကြည့်လိုက်တော့မှ တော်တော် အဆင်ပြေ သွားပါတယ်။ နည်းလမ်းလေးက ဒီလိုပါ။
For Window Vista and Window7only
Step (1) Start/ Programs/ Accessories/ right click on Command Prompt and than select
Run as Administrator to openacommand prompt.
Step (2) Type the text or copy and past it.
Step (3) Press Enter and Reboot the machine.
for use with Windows XP with SP2/SP3.
Start/ Run/ Type cmd to openacommand prompt:
Press Enter and Reboot the machine.
Then please open the command prompt as follow;
Start/ Programs/ Accessories/ right click on Command Prompt and than select
Posted by Nyein Latt at 2:13 AM